Waa Xaq; Faarax iyo Manaxe
Waa mar kale iyo taxenihii ahaa "Rag waa raggii hore, hadalna waa intuu yidhi." Waxaan maanta soo qaadanaynaa sheeko ka mid ah sheekooyinkii badnaa ee lagu qaadan jiray dugsiyadii Soomaaliya. Waxaa sheekadan gaar ahaan lagu baran jiray fasalka koowaad ee dugsiga sare. Waa sheeko diin iyo qosolba leh. Waxay sheekadu ahayd sidan: